Global Voices teny Malagasy » Filazàna tantara, mamolavola ny mahaolona ny vahoaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Filazàna tantara, mamolavola ny mahaolona ny vahoaka
Voadika ny 22 Aogositra 2019 7:14 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, Lahatsoratra voalohany, Fahafolo taona
Nanomboka tamin'ny Lingua ny tantarako niaraka tamin'ny Global Voices, nandika lahatsoratra avy tamin'ny teny Anglisy nankany amin'ny teny Espaniola niaraka tamin'ny fanampian'i Juan, mpanonta lahatsoratra tomponandraikitra tamin'ny fandikana amin'ny teny Espaniola. Tadidiko nisafidy lahatsoratra avy tamin'ireo firenena nanintona ahy hatramin'izay aho, ary avy eo namaky sy nitsidika blaogy tany rehetra tany, nikitika ary nirenireny teny.
Tamin'izany fotoana izany, tena nizarazara be toy ny amin'izao ny resaka politika tany Venezoela, saingy lavitr'ireo fisamantsamahana sy fifandirana, mbola ilay tany maro loko izay hahafahana manao zavatra maro foana i Venezoela. Ampahany mandrakariva tao anatin'ny zavatra mifamahofaho iainanay andavanandro ny zava-mahagaga tena izy. Saingy tena zara raha hita tany anatin'ny haino aman-jery izany (nasionaly sy iraisam-pirenena). Feno politika ny haninay isanandro. Chavez ho an'ny sakafo maraina, fifandirana no kafe.
Kanefa, nivelatra be niaraka tamin'ny zava-baovao maro ny tontolom-blaogy Venezoeliana. Toerana habaka sarotra vakiana, mazava ho azy, saingy feno tantara maro hotantaraina. Tadidiko ihany koa ny hasosorako tamin'izany fotoana izany, tsy noho ny adihevitra ara-politika tany amin'ny haino aman-jery irery ihany, fa koa tamin'ny fandrakofana ny kolontsaina izay tena zava-dehibe tamiko foana hatrizay. Nihananify hatrany ny tsipika manasaraka ny kolontsaina sy ny fampisehoana ara-barotra, ary hita teo anelanelan'ireo tsipika ireo ny fifandirantsika momba ny maripamantarana antsika. Tena naniry mafy aho hahita fomba vaovao mba hamaritana sy hanakaikezana ilay firenena, ny tantarany sy ny fanontaniany aho. Ary dia nieritreritra mikasika ny tontolom-blaogy Venezoeliana sy ireo tantara lazain'izany. Nieritreritra aho fa mety ho hita amin'ny fomba hafa ilay firenena raha mamaky ny tontolom-blaoginy ianao, ary avy eo aho dia nieritreritra indray ny momba ny Global Voices.
Manoratra, manazava, mamolavola ny mahaolona
Nanoratra tamin'i Eddie Avila aho mba hanontany azy raha toa ka afaka manandrana ny handray anjara toy ny mpanoratra, ary izy iny tsara fanahy iny foana moa, dia noraisiny tao anatin'ny vondron'ireo mpanoratra aho. Nikasika mpandray anjara iray adala izay novakiako tao amin'ny blaogin'ny profesora iray ny lahatsoratro voalohany. Io mpanoratra io, izay tia maka tàhaka ireo mpanoratra hafa, manadrohadro tomponandraikitra mpanonta sy ireo mpanao politika ary koa manoratra amboara voafantina ana mpanoratra tononkalo maro izay noforonin'izy tenany ihany. Tena nahafinaritra ahy ny nanoratra mikasika izany ary tena tsara be ny fahafahana manao zavatra mba hanalàna io hasosorana noho ny tsy fahampian'ny tantara momba ilay Venezoela izay tsy dia hita io.
Mazava ho azy, saika tsy azo ialàna ny politika sy ny endrika midadasika sy lehibe noho ny fiainan'ny filoha teo aloha. Fa nataoko ho iraka hefaiko ny hanome endrika vaovao ho an'ny firenena izay hitako rehefa nihalehibe aho. Nanomboka tamin'izay lahatsoratra izay, nanana fahafahana maro aho hanehoana hoe hatraiza no mety hahamaro karazana sy maha-mifangaroharo an'i Venezoela. Nanoratra mikasika ny lovany Afrikanina, ny kantony, ny literatiorany, mikasika ireo mpanakanto an-dalambe ao aminy aho.
Ary tena nahafinaritra be izany. Tiako ny fahafahana izay omen'ny GVO hanovàna ny toetsain'ny olona, hanokafana ny sehatra fampiharana ary koa, hanokafana faravodilanitra ara-kolontsaina.
Izany no ataon'ny Global Voices, ary itiavako ny momba azy. Volavolain-dry zareo ny mahaolona ny faritra sy vahoaka maro izay lasa tsy hitan'ny rafitra matanjaka nandritra ny fotoana lava be. Ary tsy irery aho amin'ny fiezahana ny hanao sary vaovao ny ampahany iray amin'izao tontolo izao. Vondrom-piarahamonina feno idealy sy tanjona mankamin'izany izy ity. Olona miady mba hanokatra habaka hafa sy hitondra fomba maromaro kokoa hidirana amin'ny fifanakalozankevitra midadasika. Tena feno fahitana zava-baovao ireo fotoana niarahako tamin'ireny olona ireny. Tetikasa, vondrona, fifampiresahana, tantara. Asehon’ ity vondrom-piarahamonina ity antsika ireo fomba rehetra mampifandray antsika.
Amin'ny fotoana toy ny antsika, rehefa tsy azo hodiana tsy hita intsony ny fifandraisana, tsy hoe mahafinaritra fotsiny ihany ny asan'ity vondrom-piarahamonina ity, fa tena ilaina. Amiko ny Global Voices, toerana hahafahanao mahafantatra fa afaka ho ampahany amin'ny hevitra-na firenena iray , ary koa olom-pirenen'ny tany ianao. Afaka mahatonga anao ho tonga saina amin'ny fahatapaham-pifandraisana, ary koa ny aingitraingitry ny firenena sy ny maripamantarana izany.
Miasa mafy ireny olona ireny mba hampifandray ny efa ntaolo be amin'ny tena mbola vaovao : ny tambajotra sosialy sy ny fikasan'ny olona, Twitter sy ireo hetsika sosialy, ireo teknolojia vaovao sy tantara. Tokana ny dianay ary hitohy ny hihamafy hatrany na eo aza ireo zava-tsarotra diavina mandrakariva rehefa miezaka ny hanao ny ilaina izahay. Ary amin'ny alalan'izany, hanohy ny hilaza tantara ny olona, ary hitohy hifangaro foana ireo kolontsaina maro. Tsapako fa hijanona amin'izany izahay, hanao ny izay tratranay mba hanohizana ny zavatra ataonay. Miaro, manokatra toerana, manazava, mamolavola ny mahaolona. Tsy hitsahatra ny hiresaka izao tontolo izao… ary hihaino izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/22/141630/